Shaaha Caanaha Leh Waxaa Uu Ilkahaaga Ka Dhigayaa Kuwa Aad U Qurux Badan (DARAASAD CUSUB) - Daryeel Magazine
Shaaha Caanaha Leh Waxaa Uu Ilkahaaga Ka Dhigayaa Kuwa Aad U Qurux Badan (DARAASAD CUSUB)
Daraasad cusub oo dhawaan lasoo saaray ayaa daaha ka fayday in caanaha oo lagu daro shaaha ay dhici karto in ay yarayso ama hoos u dhigto dabarka midabka huruuda ah ee ilkaha fuula iyaka oo ka dhigaya ilkaha kuwo aad u cad.
Xeel dheerayaasha sameeyay daraasadan oo ka howl gala jaamaca Alberta oo Canada ku taala ayaa waxa ay sheegeen in ku darista caanaha ee shaaha ay ka caawinayso in ay yarayso ama hoos u dhigto dabarka midabka huruuda ah ee ilkaha fuula,waxana suuragal ah in ay noqon karto in ay ka waxtar waynaadaan dawada ilkaha lagu cadeeyo.
Xeel dheerayaashan oo uu soo xigtay wargayskaDaily Mailee Ingriiska ayaa sheegay in shaahu uu yahay kan labaad ee dunida loogu cabitaanka badan yahay, waxana uu raad ku yeelan karaa hab dhaqanka loo isticmaalo oo ah heer ilkaha uu ku reebo baro madow iyo midabka huruuda ah.
Xeel dheerayaasha ayaa waxa ay cadeeyeen marka kasta oo qiyaasta cabitaanka shaahu ay badato ama isticmaalidiisu,waxa kordhaya marka kasta baraha madow oo isku badila dabar ama midabka huruuda ah. Laakiin waxa ay culumadani ay heshay in ku darista caanaha ee shaahu ay yarayso awooda midabka ilkuhu isku badilayaan.
Xeel dheerayaashu waxa ay intaa raaciyeen in shaaha ay ku jirto acidka loo yaqaano tannic acid oo isagu ku dhex milma ama baab’a biyaha sababana dhadhan khadhaadh, sido kale midab madow oo ay dhici karto in uu sababo dabarka ama midabka huruuda ah ee ilkaha fuula
Maxaa Ka Jira In Shaaha Bigayska Ahi Adkeeyo Lafaha Jidhka? (DARAASAD) Sirta Caafimaad Iyo Shaaha Liinta Leh